बालबालिकाको कान पाक्नुको कारण के हो ? जानिराखौँ - Everest Dainik - News from Nepal
बालबालिकाको कान पाक्नुको कारण के हो ? जानिराखौँ
काठमाडौंः कान पाक्ने समस्या वयस्कको दाँजोमा बालबालिकामा बढी देखिन्छ। बालबालिकाको भित्री घाँटीको माथिल्लो भाग र कानको मध्य भाग जोड्ने नली छोटो, सिधा र फराकिलो हुने हुनाले रुघाखोकी तथा श्वासनलीसम्बन्धी समस्याले संक्रमण गराउँछ।
बालबालिकामा नाक बन्द हुँदा, नाकभित्र र घाँटीको माथिल्लो भागमा मासु पलाउँदा र रुघाखोकी तथा पिनास हुँदा कान पाक्न सक्छ। त्यसमाथि नवजात शिशुलाई आमाले सुतेरै दूध खुवाँउदा सर्कियो वा बच्चाले उल्टी गरेको दूध कानमा पर्यो भने पनि कान पाक्ने सम्भावना हुन्छ।
याे पनि पढ्नुस बालबालिकाको पढ्ने/लेख्ने आदतमा कमी आउन दिनुहुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
याे पनि पढ्नुस रूखको छहारीमा भविष्य खोज्दै बालबालिका
ट्याग्स: कान पाक्नु, बालबालिका